Penguins of Madagascar (2014) – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Andy Richter, Annet Mahendru, Benedict Cumberbatch, Chris Miller, Christopher Knights, Conrad Vernon, John Malkovich, Ken Jeong, Peter Stormare, Tom McGrath
ဒီ ဇာတ်လမ်းလေးကတော. Skipper, Kowalski, Rico နဲ. Private join ဆိုတဲ့ပင်ဂွင်းလေးကောင်ရဲ. စွန်စားခန်းလေးတွေအကြောင်းပါ ဇာတ်လမ်းအစမှာတော့ Skipper, Kowalski, Rico တို.ဟာ Private မွေးဖွာမဲ. ဥ ကိုကယ်တင်ခဲ့ပြီး Private ဟာ Skipper, Kowalski, Rico တို.နဲ. မိသားစုဝင်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ပင်ဂွင်းလေးကောင်ဟာ နယူးယောက်ခ် မြို.ကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီး ပင်ဂွင်းတွေကို ရန်ငြိုးကြီးနေတဲ့ရေဘ၀ဲ ဒေဗ့်က ဖမ်း သွားပါတယ်။. နော.၀င်း အဖွဲ.သားတွေနဲ.ပင်ဂွင်းလေးကောင် ပူပေါင်းပြီး ရေဘ၀ဲ ဒေဗ်. ရဲ. ယုတ်မာမူတွေကို အတူတွန်းလှန်ရာကနေ အကုန်လုံး ရေဘ၀ဲ ဒေဗ်.ရဲ.ဖမ်းဆီးခြ င်းကို ခံခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ပင်ဂွင်း အဖွဲ.၇ဲ. အငယ်ဆုံးကောင်လေးဖြစ်တဲ့ Private ဟာ ပင်ဂွင်း တွေအကုန်လုံးကို ရေဘ၀ဲ ဒေ့ဗ် လက်မှ ကယ်တင်ခဲ .ပုံကိုဟာသတွေ တပုံကြီး နဲ. ကြည်.ရမှာဖြစ်လို. မြန်မြန် ဒေါင်းပြီး ကြည်.ကြပါလို. တိုက်တွန်းလိုက်ပြစေ။
Andy Richter Annet Mahendru Benedict Cumberbatch Chris Miller Christopher Knights Conrad Vernon John Malkovich Ken Jeong Peter Stormare Tom McGrath
Option9mfile.cloud5GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 10 storage.msubmovie.com5GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 11 drive.google.com5GB FHD DTS-HDMA 7.1
Option 12 drive.google.com5GB FHD DTS-HDMA 7.1